Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Denmark Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius Football' kaasoo si fiican loogu yaqaan magaca "Yurary". Sheekadeena Caruurnimada Yussuf Poulsen Plus Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii iyo Kacitaanka Yussuf Poulsen. Astaanta Sawirka: BBC, Instagram iyo bundesfootafrika
Haa, qof walbaa wuu ogyahay qaabkiisa dhabta ah ee timaha (oo leh ponytail), quwadda qarxa iyo isha hadafka, taas oo ah astaan ​​muhiim u ah ciyaarta casriga ah ee kubada cagta. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa tixgeliya taariikh nololeedkii Yussuf Poulsen oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Yussuf Yurary Poulsen. Yussuf Poulsen wuxuu ku dhashay maalintii 15th ee bisha Juun 1994 hooyadiis, Lene Poulsen, iyo aabihii dambe, Shihe Yurary, oo ku dhashay caasimada Danish ee Kobanheegan. Yussuf Poulsen waalidkiis waxay ka yimaadeen jinsiyo kaladuwan, waana xaqiiqo sharraxaad ka bixineysa muuqaalkiisa jinsiyadeed ee kala duwan. Wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qoyskiisa Tansaaniya isagoo ka yimid dhanka aabihiis. Poulsen wuxuu intiisa badan ku qaatay hooyadiis- Lene Poulsen oo reer Kobanheegan ah, Danmark.
Yussuf Poulsen wuxuu inta badan waqtigiisa ku qaatay hooyadiis- Lene Poulsen. Hal abuurka Sawirka
Haddaba aan ku siiyo xoogaa fikrado ah oo ku saabsan aabihiis soo daahay. Ma ogeyd?… Ka hor inta Yussuf Poulsen uusan dhalan, aabihiis, Shihe Yurary wuxuu ku soo shaqeeyay xirfad wanaagsan oo markab ganacsi ah oo ka soo shaqeeyay soo dejinta iyo dhoofinta wax soo saarka u dhexeeya dalkiisa Tansaaniya iyo Danmark.
Yussuf Poulsen aabihiis wuxuu ahaa badmaaxiin ka shaqeynayay soo dejinta iyo dhoofinta wax soo saarka u dhexeeya Tansaaniya iyo Denmark. Sawirka Sawirka: Kawowo, AMI-Worldwide iyo LloydsMaritime
Mid ka mid ah Shihe Yurary booqashooyinka badan ee uu ku yimid bixinta mid ka mid ah xamuulkiisa, wuxuu kula kulmay oo jeclaaday Yussuf Poulsen hooyadeed (Lene Poulsen) ee Kobanheegan. Sagaal bilood ka dib markii ay isweherayeen, Yussuf Poulsen yaqaan Yurary junior adduunka u yimid.
Kahor dhimashadii aabihiis, Yussuf Poulsen wuxuu ku koray guri dabaq ah oo qoys ah. Waqtiyada qaar, sanadihii hore ee noloshiisa waxa uu u dhadhamiyey kalsooni darro xaga wanaagga aabihiis. Dhawr jeer, Yussuf wuxuu daawaday aabihiis oo la dagaallamaya cudurka kansarka. Nasiib darrose, markii ay ahayd jilitaanka lixaad, Yussuf Poulsen Aabbihiis wuxuu u dhintay kansar. Kahor inta uusan kansarku ka qaadin, Shihe Yurary wuxuu isku dayay inuu hubiyo nolol fiican nolosha yar Yussuf, walaalkiis yar Isak iyo hooyada, Lene.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Kahor geeridiisa, Yurary Senior wuxuu ahaa taageere weyn oo kubada cagta ah oo aan daawanin ciyaaraha kaliya laakiin ku guuleystay inuu caruujiyo hamigiisa wiilkiisa da 'hore. In kasta oo ay ku adkeyd isaga inuu ka dhigto ciyaartoy ahaan waajibaadka saaran maraakiibta, Shihe Yurary ka hor geeridiisa wuxuu rajeynayay inuu ku sii noolaado riyadiisa wiilkiisa.
Si uu u sharfo aabihiis, Yussuf wuxuu go aansaday inuu ka tago meeshii uu aabihiis ka tagay, iskuulkii iyo isku mar, isagoo ku qaadanaya waxbarashada kubbadda cagta gudaha. Markii uu ahaa wiil yar, wuxuu aad u jeclaa Premier League, isagoo sheegay inuu raacay labada Barcelona iyo Liverpool markii uu yaraa. Waqtigaas Kobanheegan (oo ah caasimada Denmark), waxaa jiray oo keliya horyaalkii deenishka ama Ingiriiska, kaas oo ah waxa keliya ee uu telefishanka ka daawan karo.
Marka laga tago waxyaabaha xiisaha leh ee daawashada telefishanka, Yussuf Poulsen wuxuu ka bartay ganacsigiisa kubbadda cagta ee maxalliga ah ee Kobanheegan. Intii uu ciyaarayay, deenishka reer Tansaaniya ayaa fursad kasta u helay inuu ka soo qaybgalo tijaabooyin, taasoo ah ficil dhacay.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Mudnaanta Hore
Kadib tijaabadii lagu guulaystay, Yussuf Poulsen wuxuu bilaabay mustaqbalkiisa dhalinyarada isagoo u bilaabay BK Skjold, oo ah naadi kubbadda cagta deenishka ah oo ka yimi Østerbro, Kobanheegan oo ka ciyaaray qaybta deenishka ee 2nd. Markii la bilaabay akadeemiyaddiisa, Poulsen waxaa loo aqbalay inuu yahay difaac halkii uu doorbidi lahaa markii dambe.
Siinta kubbada cagta bilow wanaagsan waxay aheyd waxa aabihiis soo daahay uu isaga u doonayay. Xilli hore oo ku saabsan mustaqbalkiisa Poulsen wuxuu sameeyay allabaryo badan si uu u hanto riyadii aabbihiis. Masaga oo xiisaynaya aragtiyo badan oo akadeemiyadda ah, ninka reer Tansaaniyaanka ah ee sawirka hoose ka muuqda ayaa si dhaqso leh kor ugu qaaday darajooyinka isaga oo ka hor yimid kuwa ka soo horjeedda.
Yussuf Poulsen Life Career Life. Dhibcaha Sawirka: Fodboldfoto
Intii uu wali ahaa da 'yarta, reer u dhashay Kobanheegan ee indhaha ku jira ayaa bilaabay inuu soo koco, isagoo gaadhay heerkiisii ​​ugu sarreeyay ee 1.93 m (6 ft 4 inch). Sannadkii 2007, mar dambe looma adeegsan inuu noqdo difaac laakiin wuxuu ahaa qadka dhexe ee daafaca iyo weerarka.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Waddada loogu talagalay sheekada
Markii uu ahaa 14, Yussuf Poulsen wuxuu damcay inuu weynaado isagoo ku biiray dhalinyarada da'yar ee Lyngby BK, oo ah kooxda ugu sareysa deenishka ee sumcad weyn ku leh sameynta xiddigo da 'yarta ah kooxaha waaweyn ee Yurub. Wuxuu sii waday ka ciyaar ahaan sidii hore ahaan Lyngby, isagoo saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda koowaad kaliya 16.
Yussuf Yurary Poulsen ayaan isagu isla markiiba isku biirin kooxda koowaad sababtuna tahay tartamada adag ee ka dhexeeya asxaabta. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii xoogaa laga fikiray oo aan rabin inuu niyad jabiyo aabihiis, deenishka ayaa ururay. Ninka deenishka ah ee deenishka ah ee saaxiibbadiis u yeedha ayaa markiiba u noqday xoog lagu xisaabtamo inkasta oo uu da 'yar yahay.
Yussuf Poulsen wadada sheekada caannimada ee leh Lyngby BK. Astaanta Sawirka: Issuu
Waqti ayey qaadan ka hor inta uusan xiddigu xiriiriyaha '6'4' noqonin geesin aan shaki ku jirin kooxda iyo naadigiisa labadaba. Waxay qaadatay xiisaha kooxaha waaweyn ee Yurub inay dalbadaan saxiixiisa ka dib markii Yussuf uu dhaliyay shan gool oo uu ka dhaliyay xulkiisa Denmark Under-19, seddexdii kulan ee uu socday.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Kusoo sharax sheekada
Markay ahayd 3rd July 2013, Yussuf Poulsen wuxuu noqday mid kamid ah suufiyada la keenay waxaa lagu tilmaamaa a himilada fog in RB Leipzig laga dhigo koox weyn oo Bundesliga ah. Ninka deenishka ah ayaa RB Leipzig kaga soo biiray kooxda Lyngby markii kooxda ay maalgeliso Red Bull ay wali ku jirtay heerka saddexaad.
Yussuf Poulsen wuxuu kashaqeynayey qeybaha kaladuwan ee Jarmalka, isagoo ka caawinaya RB Leipzig inay ahaato mid aan laga badin seddex iyo tobankii kulan ee ugu horreeyay horyaalka xilli ciyaareedkii 2016 – 17. Awoodiisa gooldhalinta waxa ay ka caawisay kooxda inay jabiso rikoorka heysashada ugu dheer ee aan laga badinin kooxda dalacsiiyay ee Bundesliga.
Kicitaanka Yussuf Poulsen
Sida wakhtigii qorista, isagu ma ahan nooca weeraryahan ee dhali doona gooldhalinta 20-lagu daray xilli ciyaareed kuna dhameysan kara jaahiliyada gooldhalinta. Taas bedelkeeda, Poulsen waa weeraryahan dadaal badan oo kubbadda dib ugu soo laaban doona aagagga khatarta ah isla markaana si dhakhso leh u bilaabi doona weerarro - oo mararka qaar dhaliya goolal waaweyn. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Xiriirka
Sida ereyadu u socdaan; Dhab ahaan nin kasta oo guuleysta, waxaa ku sugan naag naxdin leh oo indhaha duubtay. Xaaladda gacaliyeheenna reer Tansaaniyaanka qaaliga ah, waxaa jira gabar saaxiibtinimo oo qurux badan oo magacooda la yiraahdo Maria Duus.
La kulan Yussuf Poulsen Gabadha ay saaxiibka yihiin- Maria Duus. Astaanta Sawirka: Instagram
Labada jaceyl ee laga yaabo inay midba midka kale ku wada kulmeen dalkoodii hooyo waxay wada joogeen ilaa bishii Luulyo 2015. Inaad wada joogtaan muddo dheer waxay muujineysaa xiriir caafimaad, kaasoo ah waxay ka baxsataa baaritaanka indhaha shacabka maxaa yeelay waa bilaa lacag.
Mid ka mid ah labada qof ee ay jeclaayeen fasaxyada ciidaha muuqaalka muuqaalka leh ee Iceland halkaasoo ay ku raaxeystaan ​​habeenno aan dhammaad lahayn, iyo xagaaga oo ah halka ay qorraxdu weligeed dhigto.
Yussuf Poulsen iyo Gabadha Saaxibka ah- Maria Duus waxay hal mar ku raaxeysteen Sannad cusub oo ah 2019 sanadka cusub Iceland
Maria Duus waa qof aan is jeclayn oo aan wax shaqo ah qabin marka laga reebo inay siiso taageero shucuureed ninkeeda xitaa waxaad la micno tahay inay nolosheeda si adag u xajiso. Iyada oo abaal marin u ah taageeradeeda shucuureed, Yussuf Poulsen oo ku saabsan 8th ee Sebtember 2019 ayaa u soo jeedisay saaxiibkiis, samaynta arooskooda inay noqoto tallaabada rasmiga ah ee soo socota.
Daqiiqaddii Yussuf Poulsen wuxuu u soo jeediyey saaxiibtiisa. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaato Yussuf Poulsen noloshiisa shaqsiyadeed ee ka fog nashaadaadyada kubada cagta waxay kaa caawin doontaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan shaqsigiisa. Bilaabidda, waa qof si fudud ula qabsan kara wax kasta oo tamarta ah ee ku xeeran, mararka qaarkoodna keligiis wakhti ku qaata oo ka fogaada wax walba.
Yussuf Poulsen Noloshiisa Shakhsiyeed- In aad inbadan sii baratid. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Marka laga reebo kubbadda cagta, Yussuf Poulsen wuxuu si xoogan u aaminsan yahay inuu sii wado waxbarashadiisa. Wuxuu hayaa aaminaada ah in kubbada cagta weligeed sii jiri doonin, isagoo hubinaya inay jirto baahi loo qabo in la helo shahaadada dugsiga sare. Sidaas darteed, ciyaartooygu wuxuu kaftamayaa inta udhaxeysa waxbarashadiisa iyo xirfadiisa isboorti.
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Qoyska
Isaga oo ah mas'uulka ugu sarreeya qoyskiisa Poulsen, Yussuf wuxuu ku faraxsan yahay in uu been abuuray dariiqii qoyskiisa ee madaxbanaanida dhaqaalaha dhamaanteed mahadsanid kubada cagta. Haddaba aan ku siino faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xubnaha qoyskiisa.
Yussuf Poulsen Aabaha: Magaciisa Yussuf wuxuu ka yimid dhanka aabihiis madaama aabihiis aabihiis uu ahaa muslim kahor inta uusan dhiman. Sharafta aabihiis ee dambe, Yussuf wuxuu go’aansaday inuu xirto funaanadda magaca “Yurary"Halkii"Poulsen'intii lagu jiray Koobka Adduunka ee 2018 ee Ruushka.
Yussuf Poulsen hooyadiis: Hooyooyinka waaweyn waxay dhaleen wiilal waaweyn halka Lene Poulsen ka reeban tahay. Yussuf Poulsen ayaa ku ammaanay guushii uu hooyadeed ku siiyay barbaarinta. Sidii hooyo caano u ah, riyada Lene ayaa ah in ay aragto wiilkeeda oo ku koray farxad iyo guulo sidii uu horeba u noqday.
Yussuf Poulsen iyo gacalisadiisa quruxsan- Lene Poulsen waxay wada cunayaan
Yussuf Poulsen walaalkiis: Wuxuu leeyahay walaal magac ku leh Isak Poulsen, kuna dhashay 2004. Sida hoos ku xusan, labada walaalo waxay wadaagaan xusuus aad u badan. Isak aad ayuu ugu faraxsan yahay waxa walaalkiis ku noqday shaqadiisa.
La kulan Yussuf Poulsen walaalkiis- Isak Poulsen. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - nololeedka
Barashada xaqiiqooyinka noloshiisa waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan heerka noloshiisa. Go'aan ka gaarista ficil ahaan iyo raaxeysigu maahan doorasho adag oo Yussuf Poulsen maadaama uu runtii ogyahay sida loo raaxeysto.
Noloshii Yussuf Poulsen- Muxuu fasax u yahay isaga. Astaanta Muuqaalka: Instagram
In kasta oo Yussuf Poulsen uu aaminsan yahay in lacag ku sameynta kubbadda cagta ay tahay shar shar ah, haddana, wuxuu weli dareemayaa baahida loo qabo in la helo saldhig xoog leh si dhaqaalahiisa loo ilaaliyo loona habeeyo. Natiijo ahaan, wuxuu ku nool yahay qaab nololeed celcelis ahaan inkasta oo uu 2 Million Euro (1.8 Million Pound) sanadkii mushaharkiisa.
Yussuf Poulsen Xaqiiqooyinka Nolosha - Saarista isaga iyo BMW. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Tattoo: Yussuf Poulsen wuxuu ku leeyahay layaab qaas ah oo cajiib ah lugtiisa bidix, kaasoo ay adag tahay taageerayaasha. Dhinac gacantiisa gacanta ayaa leh qoritaanka “SheheIyo mid kale "1956-1999Dhinaca ka soo horjeedka.
Xaqiiqada Tattoo ee Yussuf Poulsen. Astaanta Sawirka: sawir
In kasta oo wax yar laga ogyahay kii hore, kan labaad wuxuu u adeegaa sidii xusuusinta aabihiis, oo ku dhashay 1956 oo u dhintay kansar 1999.
Aad ayuu u xaqiiqsan yahay wuxuu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn karin: Yussuf Poulsen wuxuu aaminsan yahay inuusan u ciyaari karin Barca inkasta oo uu ku taageeray sida ilmo isagoo sheeganaya inuu naftiisa daacad u yahay. Erayadii uu la galay kristinavomdorf, wuxuu mar yiri;
Waa inaan naftayda daacad u ahaadaa waana ogaadaa waxa aan sameyn karo iyo waxa aan sameyn karin. Kama ciyaari karo Barcelona, ​​laga yaabee inaanan waligey awoodi doonin ”
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada Yussuf Poulsen iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.